Blockchain News 11 Ndira 2018 - Blockchain News
Ndira 11, 2018 arun
Blockchain News 11 Ndira 2018
Ex-Financial Regulator: Ndinoshuva angadai paakapiwa muna Bitcoin apo ndakaudza vose kungwarira
Vaimbove zvemari regulator Bart Chilton anoda akanga paakapiwa mune bitcoin nezvimwe akakurumbira cryptocurrencies shure wakati achaudza vose kungwarira.
Chilton rinoti ichiri “Wild West” kunze yaidzorwa neramangwana pamusika, asi akawedzera hombe mutengo nokufamba vane kubva “vakazodzora mwoyo panze.”
MuJapan Fisco inozivisa kushanda cryptocurrency Fund
Japanese tsvakurudzo mari akasimba uye bitcoin Exchange opareta Fisco akazivisa kuti achavarwisa munhu cryptocurrency mari.
Kuuya mushure kwakasimba mutemo bitcoin chisungo gore rapera, mutsva crypto Fund achaita mari kupfuura 300 miriyoni Yen ($2.66 miriyoni) mune bitcoin nezvimwe digitaalinen dzeEurope, maererano Nikkei.
The mari anoti wokutanga rwaro muJapan.
Arizona zvemitemo kusuma bhiri kubvumira vagari kubhadhara mitero chete Bitcoin
A itsva bhiri kuzviisa pasi Arizona weSeneti wakaramba, kana mvumo, bvumira vanhu kubhadhara kwavo hurumende mutero munataisireva vachishandisa bitcoin kana zvimwe cryptocurrencies.
Public Zvinyorwa zvinoratidza kuti bhiri - tichitsigirwa mamiriro Senator Warren Petersen uye co-dzinorongwa nevamwe vanoita zvemitemo matatu - akanga pasi nezvawo pamusoro Jan. 9. Zvinonzi kubva kare akataura Arizona museneti Rules Committee uwane mamwe kunyatsofunga.
Maererano chinyorwa, chiyero aizobvumira kuti kushandiswa “muripo suo, akadai bitcoin kana zvimwe cryptocurrency, kushandisa vezera-to-vezera nehurongwa” kuti kubhadhara “mutero uye kufarira uye Zvirango” nechikwereti kuhurumende mamiriro.
Arizona zvemitemo vakatamira kubvuma mabhiri chokuita Tech kare. Last chitubu, Paramende kunyorwa kwenyaya rugwaro kuti anoona blockchain vakasaina uye akangwara zvibvumirano zvakakosha pasi mutemo wehurumende. Govment. Doug Ducey akasaina nechiyero mumutemo wokupedzisira March.
U.S. Achaunganidza basa anoronga okisheni 3,813 BitCoins
The U.S. Achaunganidza Service achaita okisheni kure 3,813 BitCoins vakabata nezvichaitika batana, ehurumende uye administrative zviitiko. The Mari munokosha vanenge $54 miriyoni pa ano mitengo.
The okisheni kubudikidza weDhipatimendi Justice risingaoneki kuchaitika munguva yemaawa matanhatu nguva musi Jan. 22. The BitCoins zvatichapa kutengeswa muna 11 zvinogumbura, remasangano iyo ichange iine 813 BitCoins. Vatori vechikamu vanosungirwa kuita dhipoziti pamusoro $200,000, inoshandiswa akati mutsara China.
US Seneti yokuita musangano kukurukura cryptocurrencies
The U.S. Seneti pane zvemari mabasa remadziro inotakura kwokunzwa mwedzi unotevera pamwe nyika pamusoro misika regulators kukurukura bitcoin pakati achifumira nezvokunetseka pamusoro dzacho cryptocurrencies kuchitendero mari ichaita, munhu ane zvakananga zivo yacho akaudza Reuters.
The Seneti Banking Committee achatora uchapupu kubva Trading Commission Sachigaro COMMODITY hwamangwana Christopher Giancarlo uye kuchengetedzeka uye Exchange Commission Sachigaro Jay Clayton kutanga February, kunobva akati.
Russia vangagadzirisa cryptocurrency bhiri: exchanges vanotenderwa chete vakabvumira
Bazi rezveMari reRussia achaita kuwedzera cryptocurrency kunyoreswa zviri pamutemo bhiri, izvo zvichaita kuti vanotengesa kwakadaro zvinhu chete pane vamwe “pamutemo” exchanges.
Mutevedzeri rezvemari Alexei Moiseyev akaudza RNS.
The mazita pamutemo exchanges asati agamuchirwa, zviri ichiri “yakakurukura”.
Moiseev akavimbisa kuti ushumiri haadi kushomeka kuchinjwa yaivapo crypto mari, asi kutarisira kuisa “zvimwe mhando framework ".
“Ndiani crypto-mari, asi hapana achava. Asi kuritenga uye kutengeswa kuchaita kuti kwezvipimo. Pfungwa rwevanhu kuti zvichava zvakakodzera kutenga nokutengesa yesangano iri pamutemo exchanges uye achaita izvi zvinofanira, inonyoreswa.”
Nadya Moiseyev – WeGurukota Finance
Bazi Finance akapa gwaro mitemo yacho Crypto-mari muna December 2017, gwaro achapiwa vakabvuma State Duma muna February 2018. The Ushumiri anotenda kuti crypto-mari zvinofanira kufungwa pfuma, kwete mari, uye kuchera – kuwira pasi tsanangudzo dzebhizimisi mabasa nemitero inokosha.
Arkansas anowana wokutanga Bitcoin ATM
mu Arkansas’ chirefu kupfuura chivako pagere wokutanga bitcoin muchina rehurumende.
The muchina kwaswedera kutarisirwa kubva November kana yakaiswa muna Corner Store uye More pasi pasi-story 40 Simmons Tower muna Downtown Little Rock.
“Ndava yakawanikwa mijenya netsoka motokari nacho,” akati maneja Connie Davis.
Mumuchina vaiva ne Freedom Coin Inc., rine hofisi pedyo Simmons Tower.
Chris Sweeney, co-muvambi uye Chief Executive Officer Worusununguko Coin Inc., uye K.C. Surrett, Purezidhendi uye mukuru mari mukuru, vakati vanoronga yokugadza 10-15 zvakawanda michina muna Northwest Arkansas, Fort Smith, Jonesboro nedzimwe nzvimbo mumaguta ose Arkansas.
“Ndinofunga yakakurumbira nekubvimirana kuti neramangwana dzokutengeserana akagadzikana mutengo,” Sweeney akati.
“Zvinoita pamutemo sezvo yedu U.S. mari,” Said Duszota, yomunzvimbo Arkansas murume, mumwe Bitcoin ATM mutengi akanga vakabvunzurudzwa pachiitiko.
Chammhembe Koria: No anoronga kuti kurambizwe cryptocurrency
svondo rino, akawanda zvikuru vezvenhau nehoro akashuma kuti hurumende yeSouth Korea iri kuronga kuti kurambizwe cryptocurrency wokutengesera. Izvozvo zvechokwadi handizvo, sezvo bhiri raizofanira zvakaitika guruundano chekutanga pamberi pacho unogona kutorwa kushanda.
Sezvazvakanyorwa zvaitwa kubvira December 13 pamusoro 2017, South Korea Ushumiri ari kungotaura kugadzirira rugwaro kuti kuti kuvhara pasi vamwe cryptocurrency exchanges. Hazvina kuronga kurambidza cryptocurrency zvokutengeserana iri kwenguva pfupi.
Kana hurumende yeSouth Korea aida kuti kurambizwe cryptocurrency wokutengesera, zvingadai vakaita kudaro musi December 13, pane kusunungura siyana pamutemo zveupfumi yaisanganisira kurambidza vatorwa zvokutengeserana cryptocurrencies.
CCN akazivisa mana makuru pamutemo zveupfumi hurumende South Korea iri kutarisirwa dzika ne January 20:
– Kudzivirira unaccredited vanoita kubva pakubata Nokurasikirwa kuburikidza zvikuru kugadzikana cryptocurrencies.
– Kudzivirira zvachose yaidzorwa cryptocurrency exchanges kubva uchishanda sezvo dzokufungidzira platforms kuti unaccredited vanoita.
– Chikumbiro nemabhengi exchanges kuitira underaged vanoita uye vatorwa hadzingagoni rakazaruka zvokutengeserana Nhoroondo iri cryptocurrency exchanges.
– Kwenguva misa zvechechi vanoita uye chitoro vanoita kubva bhizimisi iri cryptocurrencies.
The South Korean Ushumiri Strategy uye Finance akasimbisa kuti haribvumirani nepfungwa panyaya yokusarudza Bazi Justice.
"Hatidi zvavakagoverwa anoona Ushumiri Weruramisiro pamusoro zvinogona cryptocurrency Exchange kurambidzwa,"MSF akati.
pachena, ari cryptocurrency zvokutengeserana kurambidzwa kupfimbwa asina kunyorwa kwenyaya kana kunyange vakabvumirana pamusoro neZasi Korea Ministry of Strategy uye Finance.
Previous Post:Blockchain News 10 Ndira 2018
Next Post:Bitcoin Hardforks chii?
Are You Looking For The Newest Hottest Altcoin? Baer Chain [BRC]! miriyoni